Xeerarka Warbaahinta Bulshada ee Goobta Shaqada | Martech Zone
Arbacada, Agoosto 10, 2011 Arbacada, Oktoobar 26, 2011 Douglas Karr
Kani waa faahfaahin xiiso leh oo ku saabsan siyaasadaha warbaahinta bulshada ee shirkadaha. Waa muuqaal qurux badan oo xiiso leh laakiin, sida ugu badan ee wadahadalka siyaasadda warbaahinta bulshada waxay kaliya diirada saareysaa midkood ilaalinta astaanta, kor u qaadida sumadda, ama xorriyadda shaqaalaha. Dhibaatadu waxay tahay in ay jirto fursad kale oo aad u weyn oo u dhexeysa taas oo Infographic taabtay laakiin aan si faahfaahsan uga bixin about
Wax soo saar!
Awoodda isku xirnaanshaha asxaabta, xirfadleyda, iibiyeyaasha iyo macaamiisha waxay fursad siineysaa shirkadaha inay si dhakhso leh u bixiyaan una soo saaraan macluumaadka. Halkii aad ka fariisan laheyd taleefanka ama aad isku dayi laheyd inaad ku aqriso dukumiintiyada iyo caawinta feylasha, shaqaalahaaga ayaa ka heli kara khadka tooska ah waxayna la xiriiri karaan isticmaaleyaasha kale, kuwa wax iibiya ama la taliyayaasha si ay u helaan macluumaadka ay u baahan yihiin si shaqada loo qabto.
Sidoo kale, tan waxaa loo isticmaali karaa qorista, cilmi baarista tartanka, sahanno, xiriirka macaamiisha… faa iidooyin badan ayaa ugu jira ganacsiga bulshada! Oo leh 70.7% shirkadaha xayiraya baraha bulshada, waxaa jira fursad aan caadi aheyn oo shirkaddaada aad ku booddo iyaga oo ka faa'iideysanaya qalabka dhexdhexaadka ah.
Arrinta kale ee halkaan ku xusaysa… oo leh taleefannada casriga ah ee kobaca laba-godka ah, shirkadaha ayaa naftooda ku khiyaaneeya iyagoo u maleynaya inay xayirayaan baraha bulshada. Tani waxay i xasuusineysaa maalmihii wanaagsanaa ee 'Internet', halkaasoo kaliya labo qof oo shaqaale ah oo ka shaqeeya boosaska ugu muhiimsan ay marin ka heli karaan internetka inteena kalena waa inaan si aamusnaan ah uga shaqeyno cunug yar. Intranet. Kaliya waan iska dhiibnay oo waxaan ku ciyaarnay Kalinimo.
Maxaad adduunka uga joojineysaa shaqaalahaaga inay ku xirmaan xirfadlayaal kale? Haddii shaqaalahaagu ku jiraan Facebook iyo ahaanshaha aan wax soo saar lahayn, taasi maahan arin Facebook ama amni, taasi waa arin waxqabad… shaqada ka cayri! Hogaamiyaasha wanaagsan waxay ka qaadaan isbaarooyinka, kuma darin.
Xigasho ka timid Infographic:
Maanta, shirkaduhu waxay hirgelinayaan siyaasadaha warbaahinta bulshada ee dhammaan qaababka iyo cabirrada - mana aha wax la yaab leh sababta: bil kasta waxaan maqalnaa musiibo kale oo PR ah sababtoo ah hal tweet ayaa si xun u xumaaday. Tani waxay horseeday shirkado badan inay mamnuucaan isticmaalka baraha bulshada gebi ahaanba inta shaqaaluhu shaqada ku jiraan. Laakiin shirkadaha kale waxay qaadayaan habka ka soo horjeedka, iyagoo aaminsan in jiil ku soo kordhay tikniyoolajiyadu ay wax soo saar badan leeyihiin marka loo oggolaado inay ku isticmaalaan ikhtiyaarkooda.
Yaan lagaa Niyad jabin Baraha Bulshada